Yiyiphi imifanekiso engama-20 yasezidolophini enobuchule?
Isixeko ngasinye sinobugcisa baso basesidlangalaleni, kunye nemifanekiso eqingqiweyo yasezidolophini kwizakhiwo ezixineneyo, kwiingca ezingenanto kunye neepaki zasesitalatweni, zinika imeko yedolophu ukuba ibe sisidambisi kunye nolungelelwaniso ekuxineni. Ngaba uyazi ukuba le mifanekiso iqingqiweyo yesixeko ingaluncedo xa uyiqokelela kwikamva. Imifanekiso eqingqiweyo ye- “Pow ...
Zingaphi kwezi mifanekiso iqingqiweyo zili-10 uzaziyo ehlabathini? Kwimilinganiselo emithathu, imifanekiso eqingqiweyo (imifanekiso eqingqiweyo) inembali ende kunye nesiko kunye nokugcinwa kobutyebi. I-Marble, ubhedu, ukhuni kunye nezinye izinto zenziwe, zenziwe, zaza zaqanjwa ukuze zenze imifanekiso ebonakalayo kunye nezobugcisa ...
Ababhikishi base-UK badiliza umfanekiso oqingqiweyo wekhoboka le-17th century e-Bristol
ngomphathi ku 20-07-25
LONDON - Umfanekiso oqingqiweyo womrhwebi wamakhoboka wenkulungwane ye-17 kwidolophu yaseBritani esemazantsi eBristol wadilizwa phantsi ngabaqhankqalazi "ngeeNkcubeko eziMnyama" ngeCawa. Imifanekiso kumajelo asekuhlaleni ibonise abaqhankqalazi bekrazula umfanekiso ka-Edward Colston ukusuka kwi-plinth yayo ngexesha loqhanqalazo esixekweni c ...
Kuyo yonke i-United States, imifanekiso eqingqiweyo yeenkokheli ze-Confederate kunye namanye amanani embali anxulumene nobukhoboka kunye nokubulawa kwabantu baseMelika bayachithwa, bahlanjululwa, batshatyalaliswa, bafuduswa okanye basuswa emva koqhanqalazo olunxulumene nokufa kukaGeorge Floyd, umntu omnyama, emapoliseni Ukugcinwa ngoMeyi ...
Iprojekthi yeAzerbaijan ibandakanya umfanekiso wobhedu kaMongameli kunye noMfazi kaMongameli.
Iprojekthi kaRhulumente waseSaudi Arabia
Iprojekthi kaRhulumente waseSaudi Arabia ineemifanekiso ezimbini zobhedu, ezizikwere ezinkulu i-rilievo (i-50 yeemitha ubude) kunye neNdunduma yeSand (eyi-20 yeemitha ubude). Ngoku bemi eRiyadh kwaye bavakalisa isidima sikarhulumente kunye nokudibanisa iingqondo zabantu baseSaudi.
Sithumele kwelinye ilizwe uthotho lwemifanekiso eqingqiweyo yebronze yase-United Kingdom ngo-2008, neyayenziwe yajikeleza umxholo wehashe elibophayo, ukunyibilikisa, ukuthengwa kwezinto kunye nokufaka amahashe asebukhosini. Le projekthi yafakwa eBritani Square kwaye isabonakalisa ubuhle bayo kwihlabathi okwangoku. Wha ...
Senze iseti enye yemifanekiso yobhedu yaseKazakhstan ngo-2008, kubandakanya iziqwenga ezi-6 ze-6m eziphakamileyo Jikelele kwiHhashi, isiqwenga esinye se-4m-ukuphakama i-Emperor, isiqwenga esinye se-6m-high Giant Eagle, isiqwenga esinye se-5m-logo ephezulu, 4 iziqwenga ze-4m-Horse ephezulu, iziqwenga ezi-4 ze-5m-Deers ezinde, kunye nesiqwenga esinye se-30m-ubude Relievo expre ...
Ukwahlulahlula nokuBaluleka kweBronze yeBull Sculpture
Asingobantu abangaziwayo kwimifanekiso eqingqiweyo yeenkomo zobhedu. Sibonile amaxesha amaninzi. Kukho iinkunzi zeenkomo ezaziwa kakhulu eWall Street kunye nezinye iindawo ezidumileyo. Iinkunzi zeenkomo ezazingoovulindlela zazidla ngokubonwa kuba olu hlobo lwesilwanyana luxhaphakile kubomi bemihla ngemihla, ke ngoko singumfanekiso oqingqiweyo wenkunzi yenkomo yobhedu ...
I-5 ephezulu "eqingqiweyo yamahashe" emhlabeni
Owona mfanekiso ungaqhelekanga-wehashe wase-Wentzlas kwi-Czech Republic Phantse ikhulu leminyaka, umfanekiso oqingqiweyo ka-St Wentzlas kwi-St WentzlasSquare e-Prague ibiliqhayiya labantu beli lizwe. Kukukhumbula inkosi yokuqala kunye nomphathi we-Bohemia, iSt. I-sac ...
Uyilo lomzobo ohombisayo
Imifanekiso eqingqiweyo ngumzobo wobugcisa ongowasegadini, onempembelelo, ifuthe kunye namava mkhulu kakhulu kunezinye izinto ezintle. Umzobo ocwangciswe kakuhle kwaye mhle unje ngeeperile ekuhombiseni umhlaba. Kubukrelekrele kwaye kudlala indima yesigqibo sokuhombisa imeko-bume ...
Isikhumbuzo seminyaka engamashumi amahlanu seBronze yokuTyibilika kwehashe ukufumana iGansu, China
ngomphathi ku 19-08-10
Ngo-Septemba ka-1969, umfanekiso oqingqiweyo wamandulo wase-China, i-Bronze Galloping Horse, wafunyanwa kwi-Leitai Tomb ye-Eastern Han Dynasty (25-220) e-Wuwei County, kwiPhondo lase-China i-Gansu. Umfanekiso oqingqiweyo, okwabizwa ngokuba yiGalloping Horse Treading kwiFlying Swallow, yi ...